हार्दिक बधाई ! अमेरिकामा ट्याक्सी चलाउने महेन्द्र बहादुर केसीलाई परेको २३ करोड ३४ लाखको त्यो भाग्य चिठ्ठा ! – yuwa Awaj
मंग्सिर १, २०७७ सोमबार 1
काठमाडौ : सानफ्रान्सिस्को, यूएसए । हामी कहिलेकाही कर्म ठूलो की भाग्य भन्ने वाद-बिवादमा भाग्य नै होला भन्न बाध्य हुने घटना पाउँछौ । हुन त भाग्यमा धेरैको विश्वास कम हुँदै गएको छ किनकी कर्ममा तत्काल फल मिल्ने भएकाले भाग्यतर्फ ढल्किनेहरु अहिलक कम छन् ।
तर के थाहा त्यो कर्म गर्ने जोश र जाँगरपनि तपाईकै भाग्यका कारण त हैन ? यसरी बहस गर्दा भने भाग्यतर्फको वजन पक्कै वढ्छ । अब कुरा गरौँ भाग्य चिठ्ठा को । हुन त भाग्य चिठ्ठामापनि कर्म जोडिएको नै छ । चिठ्ठा भर्ने कर्म नै गरेन भने के को भाग्य चम्किनु । यसैले यी एक अर्काका परिपूरक हुन् । आज हामी एक नेपाली जसको भाग्य चम्किदा के भयो यहाँलाई जानकारी गराउछौ ।
नेपाली मूलका अमेरिकी ट्याक्सी ड्राइभर महेन्द्र बहादुर केसीलाई अमेरिका छिरेपछि पैसा कमाउने हुटहुटी थियो ।
यसैका लागि उहाँले दिन रात मेहनत गर्नुभएको छ ।
हिजो यो भाग्य चिठ्ठा परेको खबर पाउँना साथ हामीले घर सल्लाह गरेका छौ की अब पिता जीकोपनि शल्यक्रिया गर्नेछौ । मेरो स्कुलको शुल्क बाँकी नै थियो । पिता जीको कमाईबाट हामी मात्र जिन्दगी चलाइरहेका थियौँ । अब मेरो स्कूलको ऋण भुगतान हुनेछ । उनले यसो भन्दै गर्दा हर्षविभोर उपस्थित समुदाय भावुक बनेका थिए ।
त्यसैले आज हामीले त्यो चिठ्ठापछि उनको जीवनमा के परिवर्तन आयो भनेर बुझेका थियौँ । त्यहाँका गैर आवसिय नेपालीका नेताले अहिले उनको उपचार भएको, उनका बाबु आमाको शल्यक्रिया भएको र छोरीलेपनि राम्रोसँग पढ्न पाएको बताएका छन् ।
यो सामाग्री पढेपछि तपाईले भाग्य र कर्ममा बराबर विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ । भाग्य छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुहेर हुन्न भन्ने उखान भने कहिलै नभुल्नुहोला । किनकी भाग्यचिठ्ठा पार्न त्यो चिठ्ठाको टिकट किन्ने कर्मपनि अवश्य गर्नुपर्छ । चिठ्ठा पर्छ भन्दैमा फेरी ठूलो रकम गुमाउन नलाग्नुहोस् । त्यसले फेरी अर्को समस्या निम्त्याउँछ । जनबोली
Prevओलीले एमसीसीसँग अर्को गोप्य सम्झौता गरेको प्रचण्डको खुलासा…हेर्नुहोस् ।
Nextजनता समाजवादीले फिर्ता गरेन सांसदहरूको दसैं भत्ता !